Fitoriana bilaogy noho ny fanalam-baraka tao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2019 3:47 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Marsa 2005)
Tsy misy intsony ny Mediaah!. Nanandratra ny tenany ho mpitsikera “mahery vaika tsy mitanila” ny media Indiana, indrindra ny Times of India, ilay bilaogy mampiady hevitra mpitsikera media, tantanan'i Pradyuman Maheshwari, tonian-dahatsoratry ny Maharashtra Herald ao Pune. Amin'ny alalan'ny teny filamatra, “Ny Median’ ny Media. Vaovao sy fanehoan-kevitra tsy misy famerana ao amin'ny media Indiana”, Nanakiana mafy ny Times ny Mediaah, ka novaliana fitoriana fanalam-baraka sy fitakiana fanesorana ireo lahatsoratra 19 ao amin'ny tranonkala Mediaah izany!. Raha tokony hanaisotra ireo notsongaina, dia nisafidy ny hanakatona tanteraka ny tranonkala i Maheshwari.
Manoratra ao amin'ny Online Journalism Review an'ny USC Annenberg, mahita ny toe-draharaha ho toy ny fanehoan-kevitra mampalahelo momba ny toetran'ny tsikera ny media ao India i Mark Glaser. Nanipika i Glaser fa ny fanakianana vao haingana nataon'i Maheshwari dia avy amin'ny hetsika mahatsikaiky nataon'ny MediaNet tamin'ny Times, izay ahafahan'ny olona sy ny orinasa mividy “tranobe fahatsiarovana” – sary sy lahatsoratra famantarana ao amin'ny pejy fanoratan'ny Times of India.
Milaza ireo feo manodidina ny tontolon'ny bilaogy Indiana izy, anisan'izany ny namako ao amin'ny WorldChanging, Rohit Gupta, izay miantso ireo bilaogera mba hijoro manoloana ny Times, mampitandrina fa, “Mahakasika ny fahalalahan'ny bilaogera rehetra avy any India izany, ka hiady ho azy izahay. ” Nandray anjara ihany koa ny bilaogy tahaka ny Mediaha sy Save Mediaah.
Saingy tsy ny rehetra no malahelo mahita ny fahalasanan'ny Mediaah! Tsy miraharaha i Kiran Jonnalagadda: “Rehefa mitsikera ny tsy fisian'ny etika amin'ny famoahan-dahatsoratra ianao, dia tsy manao izany amin'ny fiantsoana ireo mpamoaka azy ho mpivaro-tena, mamorona tantara, fa manala tsiny ny tenanao amin'ny ‘haha, mba mivazivazy fotsiny.'” Ary manana lahatsoratra lavalava i Dance With Shadows, milaza fa nataon'ny tenany ny ratran'ny Mediaah!